एसएलसी | Nagarik News - Nepal Republic Media
रूबी रौनियार ६ फाल्गुन २०७७ बिहीबार ३ मिनेट पाठ
त्यो एसएलसीः प्रधानमन्त्रीको जन्म दिन परेपछि परीक्षा सारियो
एसएलसी परीक्षा चलिरहेको थियो। तर यत्तिकैमा अचानक इतिहास विषयको परीक्षा तोकिएको दिन नहुने र भोलिपल्ट गरिने सूचना जारी भयो। धेरैजना के के न भयो भनेर रनभुल्लमा परे।
नागरिक ७ माघ २०७६ मंगलबार २ मिनेट पाठ
पश्चिमेलीको मन जित्दै बुटवल–भैरहवाका उच्च मावि
कुनै समय थियो, एसएलसी वा एसइई परीक्षा सकिएलगत्तै बुटवल भैरहवाका नाम चलेका स्कुलका अब्बल भनिएका विद्यार्थी ब्रिज कोर्स पढ्ने बहानामा काठमाडौं हानिन्थे। रिजल्ट आउने बेला काठमाडांैका नाम चलेका कलेजमा भर्नाका लागि भनसुन सुरु हुन्थ्यो। काठमाडौंका टप भनिएका कलेजका सञ्चालकहरू आफैं उत्कृष्ट विद्यार्थी खोज्दै बुटवल आउँथे। तर, पछिल्लो समय यहाँको शैक्षिक माहोल फेरिएको छ। कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि काठमाडौं जाने विद्यार्थीको संख्या जिल्लामा नगन्य छ। रुपन्देहीसँगै पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थी अभिभावकको रोजाइमा बुटवल, भैरहवाका कलेजहरू पर्न थालेका छन्। जसका कारण यहाँका माविहरूमा अहिले एसइई पास भएका विद्यार्थीको भर्नाका लागि भीड बढेको छ।
रेखा भुसाल १९ असार २०७६ बिहीबार ११ मिनेट पाठ
अलिअलि गर्दै एक करोडको छात्रवृत्ति
गरिबीका कारण उनले उच्च शिक्षा पढ्न सकेनन्। अभावले राम्रोसँग पढ्न नपाउँदा उनले एसएलसीअध्ययन पनि पूरा गर्न सकेनन्। पढ्ने धोको अधुरै छाडेर उनी खाडी पुगे। २०५० सालमा परिवारलाई डेरामा राखेर धन कमाउन साउदी अरब गए। पाँच वर्ष छ महिना विदेशमा श्रम गरेर फर्किए। आफूले नपढे पनि छोराछोरीलाई पढाए।
सविता श्रेष्ठ ३० वैशाख २०७६ सोमबार ६ मिनेट पाठ
‘एसएलसी पास हुँदा दुःखी भएँ’
एसएलसी पास भएको दिन म निकै दुःखी थिएँ । त्यति धेरै दुःखी त्यसपछि कहिल्यै भएन । त्यो दिन फेरि बाँच्न मन छ ।
नागरिक २८ चैत्र २०७३ सोमबार ४ मिनेट पाठ
खेलमा त विभिन्न तौल समूहमा वर्गीकरण गरी प्रतियोगिता हुन्छ। यो एसएलसीमा कति पक्षपाती व्यवहार? अंग्रेजी माध्यममा पढे–बढेका विद्यार्थी र एउटा साधारण प्यासेज पनि कनीकुथी अर्थ्याउनुपर्ने सरकारी परीक्षार्थीबीच एकै प्रतिस्पर्धा, समान प्रश्नपत्र।
नागरिक १२ चैत्र २०७३ शनिबार १४ मिनेट पाठ
एसएलसी खारेज, अब एसइई हुने
सरकारले यसै वर्षदेखि एसएलसी परीक्षाको नाम फेर्‍यो। संशोधित शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह कायम गरियो । तर, कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनको जिम्मेवारी भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नै पाएको छ।
हिमाल लम्साल १ चैत्र २०७३ मंगलबार ४ मिनेट पाठ
एसएलसी परीक्षाको अन्योल
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधनपश्चात् सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न अब एसएलसी परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थियो र त्यो आजका दिनसम्म पनि उत्तिकै मात्रामा सोधिने गरेको छ। किनकि १९९० सालदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको एसएलसी परीक्षाले आममानिसमा एउटा गज्जबको छाप बसालिसकेको छ।
डा. हरि लम्साल ३ फाल्गुन २०७३ मंगलबार ८ मिनेट पाठ
प्रहरीले एकहजार रुपैयाँमा एसएलसीको प्रमाण पत्र बनाउने ब्यक्ती सहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र देखि सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयसम्मका नक्कली पत्र बनाउने तीनजनालाई पक्रेको हो।
दीपक खरेल २० पुस २०७३ बुधबार ३ मिनेट पाठ
एसएलसी पूरक परीक्षा आजदेखि सुरु
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीले देशभरका १९२ वटा परीक्षा केन्द्रमार्फत आजबाट प्रवेशिका (एसएलसी) पूरक अर्थात ग्रेड वृद्धि परीक्षा सुरु गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद काप्रीले आजदेखि सुरु भएको परीक्षामा नियमित तर्फ एक लाख आठ हजार ३२६ जना र एक्जाम्टेड तर्फ ३९ हजार २५७ जना गरी कुल एक लाख ४७ हजार पाँचसय ८३ जना सहभागी भएको जानकारी दिए।
नागरिक १४ श्रावण २०७३ शुक्रबार १ मिनेट पाठ
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले यही साउन १४ गतेबाट सुरु हुने एसएलसी पूरक अर्थात् ग्रेड वृद्धि परीक्षाको तयारी पूरा गरेको छ। कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद काप्रीले १४ गतेदेखि सुरु हुने ग्रेड वृद्धि परीक्षाको तयारी पूरा गरेको आज जानकारी दिए। उनले परीक्षाका लागि आवश्यक प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका र अन्य सामग्री जिल्लाहरुमा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
नागरिक १० श्रावण २०७३ सोमबार २ मिनेट पाठ
एसएलसीपछि विषय छनोटका आधार
एसएलसीपछि विद्यार्थीलाई कुन विषय अध्ययन गर्ने भन्ने अन्योल हुने गर्छ। एकातिर विद्यार्थीलाई पेसागत परामर्श दिइएको हुँदैन, अर्कातर्फ परिवारले चाहेको विषय पढ्न दबाब हुने गर्छ। एसएलसीपश्चात् विद्यार्थीमा मानसिक दबाब तीव्र हुन्छ।
खगराज बराल १२ असार २०७३ आइतबार १३ मिनेट पाठ
प्राविधिक एसएलसीको नतिजा प्रकाशन
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले बुधबार दिउँसो प्राविधिक धार तर्फको एसएलसीको नतिजा प्रकाशीत गरेको छ। नियमित र इक्जाम्टेड गरी कुल ३ हजार २ सय २६ विद्यार्थी सहभागित रहेका थिए।
रुवी रौनियार ८ असार २०७३ बुधबार ३ मिनेट पाठ
काठमाडौं-खेलमा जस्तै पढाईमा पनि नेपाली खेलाडी अब्बल देखिएका छन्। एसएलसको परीक्षामा खेलाडीले पाएको सफलताले यस्तै संकेत गरेको छ। न्यु डायमन्ड एकेडेमीकी भलिबल खेलाडी सबिता ‘लो’, पनमिका राई र १२औं सागमा नेपालको लागि स्वर्ण पदक जितेकी निमा घर्ती मगरले एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्।
कमल खत्री ४ असार २०७३ शनिबार ४ मिनेट पाठ